Zvino hongu! Apple inotumira mamiririri ehurukuro inokosha muna Gunyana 12 | Ndinobva mac
Zvino hongu! Apple inotumira kukoka kweshoko rakakosha munaGunyana 12
Chekupedzisira uye mushure mekupa kufunga kwakanyanya kune inogona kuvhurwa zuva reiyo nyowani iPhone uye zvimwe zvese zvishandiso zvinotarisirwa kuti zvive zvakakosha munaGunyana, Apple inosimbisa zuva ratakange tichifungidzira kwenguva yakareba uye zvinosimbiswa kuti Chitatu, Gunyana 12, vachazooneswa kuSteve Jobs Theatre muApple Park mhando nhatu itsva dze iPhone.
Pakutanga Zvinotaridza kuti pachave nemhando nhatu dze iPhone dzatichaona mune yakakosha yeChitatu, asi ichi ndicho chinhu chisingazo zivikanwe zvechokwadi kusvikira zuva rehurukuro. Chero zvazvingaitika, chatiri chokwadi ndechekuti zuva racho ratove pamutemo uye vamwe vezvenhau vane rombo rakanaka vari kutambira kukokwa vanozvisimbisa.
Chinyorwa chezvigadzirwa zvinogona kuvhurwa zvinonakidza
Isu tinovimba kuti mune ino keyword nyowani AirPower yekuchaja mabhesheni achanyatso kusvika, itsva Apple Watch modhi, pamwe isina waya yekuchaja bhokisi reAirPods, pamwe yakavandudzwa MacBook kana MacBook Air modhi uye zviri pachena kuti chiratidzo cheiyo chiratidzo, iwo matatu matatu mamodheru ayo ane Runyerekupe kwemwedzi, imwe 5,8-inch, imwe 6,1-inch, uye imwe 6,5-inch. Ese aya mamodheru eApple anga aine dhizaini yakaenzana neiyo yazvino iPhone X, chii chinozoshanduka mavari richava rudzi rwechidzitiro, zvimwe zvemukati zvemukati, makamera uye zviri pachena kukura kwese kweiyo iPhone pachayo.
Zvese zvakagadzirira kuratidzwa kuti kuitwe muApple Park hombe, kwasara mazuva mashoma kuti uone nhau dzese dzatinoratidzwa kuApple uye zvakare tichava nemaitiro matsva ekushandisa akagadzirira kutanga pazuva rimwe chetero, saka pati izere yemunhu wese. Iye zvino, unogona kutara zuva iri nezvitsvuku kuti uone izvo zvitsva kubva kuApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Zvino hongu! Apple inotumira kukoka kweshoko rakakosha munaGunyana 12
Chiitiko chaGunyana 12 chichave chinotepfenyurwa mukushambadzira kwemunhu wese
Safari Technology Preview inosvika vhezheni 64